Statistika momba ny marketing 30 tsy tokony halainao | Martech Zone
Statistika momba ny marketing 30 tsy tokony halainao
Alakamisy, Aogositra 22, 2013 Alakamisy, Aogositra 22, 2013 Douglas Karr
Ny infographic rehetra izay mamerina ny mpivarotra ho amin'ny fototry ny ezak'izy ireo dia matanjaka tokoa. Vao niara-nipetraka tamin'ny mpanjifa iray izahay androany ary namakivaky ny làlan'ny paikadin'ny votoaty lehibe… mamolavola atiny vao haingana sy matetika ary mifandraika amin'ny sehatra novainaina ho an'ny karoka. Miaraka amin'io tsipika io dia misy, miantoka ny fametrahana paikady finday. Ary miaraka amin'izany, mamolavola fisian'ny fiaraha-monina hananganana fahefana sy fitaomana - mamily ny olona hiverina amin'ny varotrao amin'ny Internet. Ary, mazava ho azy, ny fampidirana sary amin'ny alàlan'ny infografika sy horonan-tsary ho an'ireo mpitsidika manintona azy ireo.
Optimind dia nanangona an'ity saripika statistikan'ny varotra nomerika 30 ity mba hotadidina ao an-tsainao amin'ny marketing eo amin'ny Internet sy ny fisian'ny ecommerce anao.
Ity infographic ity dia novolavolain'i Optimind, orinasam-panjakan'i Phillippines. Ho an'ny serivisy marketing nomerika dia azonao atao ny mitsidika www.optiminddigital.com. Fa Malagasy famolavolana ary SEOdia tsidiho ny www.myoptimind.com.
GoAnimate: Mamolavola, mamorona ary mizara horonantsary mihetsika
TOMS: Fikarohana tranga iray amin'ny marketing ara-bola mahasoa
29 Aogositra 2013 amin'ny 9:15 PM
Ny maso ivoho nomerika sy orinasa dia tena hianatra zavatra betsaka amin'ity lahatsoratra ity!
Sep 12, 2013 amin'ny 8: 22 AM
Azonao omena ve ny kaody hamerenana ity infographic ity.
Dec 24, 2013 amin'ny 2: 17 AM
Antontan'isa tena ilaina amin'ny fandaminana ny hetsika manaraka ary tena fampahalalana!